Mpitondra mahefa… mahafaka olana | NewsMada
Mpitondra mahefa… mahafaka olana
Tato ho ato, saika re etsy sy eroa ny karazana fitarainana na fangatahan’ny vahoaka eny ifotony noho ny faha­sa­hi­ra­na­na na olana mahazo azy: tsy fandriampahalemana, ohatra, fa­ha­ratsian’ny lalana, ady tany… Amin’izany, any amin’ny hoe tompon’andraikitra mahefa avy hatrany no hiantefan’ny alahelo sy fanantenana. Mby ao an-tsaina ho azy amin’izany ny fitondrana foibe.
Tsy misy na tsy mahefa ny solontenam-panjakana na mpitondra eny ifotony, na olom-boafidy na olom-boatendry? Na tsy mihaino ny fitarainana, na tsy mahita ny zava-misy any an-toerana… Tsy vitan’izay, mety ho angady tsy mahatapaka ahitra? Na iandrasana ny fitondrana foibe avokoa ny zava-drehetra… Eny, na olana madinidinika aza, misy mitaraina amin’ny mpitondra mahefa.
Mety eo ihany koa ny tsy fifampitokisana tsy mahafa-bela? Na tsy tonga any amin’izay tokony hiantefany ny fampi­a­ka­ra­na fitarainana avy any ifotony… Tari-drano an-kilahila ka ny mania na very no betsaka. Sarontsaronana na odian-tsy hita ny olana mampikaikaika ny vahoaka fa manala baraka ireo tsy mahavita ny asa aman’andraikitra, na ny fampiakarana fitarainana ihany aza?
Mbola raharaha hafa ambonin’izany ny mety ho fisian’ny tsikombakomba noho ny ady sy fiarovana tombontsoa ma­no­ka­na, ny fisian’ny kolikoly, ny fisian’ny tsimatimanota… Hany ka tena misy ny faritra zanak’Ikalahafa na lavitra fanjakana tanteraka. Izany rehetra izany no mahatonga ny vahoaka ifotony miantso avy hatrany ny hoe mpitondra mahefa amin’izay manahirana azy?
Tena mila arenina sy averina ny fifampitokisana ifotony? Na amin’ny fitsinjaram-pahefana izany, na amin’ny fanaraha-maso… Mba tena ho tsapa sy iainan’ny vahoaka fa misy fan­ja­kana ny toerana misy azy, tan-dalàna, afa-miaro azy, azo ita­rainana… Miara-dalana amin’izany ny tamberin’an­drai­ki­tra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Amin’izany, mahefa tokoa ny hoe mpitondra?